शान्तिले आज बल्ल शान्ति पाइन् । युकेको समर सिजन । खुला आकाश, घमाइलो दिन, हरियाली वनजंगल र जतासुकै ढकमक्क फूलैफूल । सफा र फराकिला सडकहरू, त्यही सडकमा सुकिलामुकिला गोराहरूको चहलपहल, चिरबिर गर्दै स–साना चल्लाहरूलाई चारा खुलाउँदै गरेका चराहरू, पाठोपाठीहरू लिएर चौरमा बुर्कुसी मार्दै गरेका मृगहरू । निसंकोच र बेपर्वाह स्वतन्त्र विचरण गरिरहेका ती चराचुरुंगी र जनवार । कति सुन्दर, मनमोहक र भाइचारा सम्बन्ध छ यहाँ । युकेको समरमा नरम्ने को होला र ?
शान्त, स्वच्छ र रमणीय त्यही वातावरणलाई क्षणभरका लागि भंग गरिदिन्छ । एक्कासि एउटा कालो, चिल्लो, लामो, महँगो कार त्यहाँ प्रवेश गर्छ । कारभित्र चिल्लो कफिन । कफिनभित्र सारी, चोली, सिन्दुरपोतेसहितको शृंगार गरिएको शान्तिको मृत शरीर । कफिनमाथि ठूलो फूलको बुकी, मगर संघ युकेको झन्डा र शान्तिको अग्रदूत भगवान् बुद्धको झन्डा ओढाइएको छ । त्यही कफिन बोकेको कारको पछिपछि शान्तिका श्रीमान्, छोरी, भाइबुहारीहरू, नजिकका नातेदार तथा इष्टमित्र फूलका गुच्छाहरू हातमा लिएर बेलायतको अल्डरसटस्थित मिलिटरी सिमेटेरीमा आइपुगेका छन् ।
हातमा पुष्पगुच्छा र खादा लिएर बाटोको दायाँबायाँ बेलायतवासी नेपाली, शान्तिका नातेदार, इष्टमित्र, साथीभाइ र शुभचिन्तकहरू लामबद्ध प्रतीक्षामा उभिएका छन् । मगर संंघ युकेको झन्डा र भगवान् बुद्धको झन्डाले सजिसजाउ, ‘ओम माने पद्मे हुँ’ मन्त्रको गुञ्जन, सेतो कमिज, कालो टाई, कालो सुट र कालो युनिफर्ममा सजिएका हजारौं मलामीको उपस्थितिले यो सामान्य व्यक्तिको अन्तिम बिदाइ नभएको छनक दिइरहेको छ । शान्तिको मृतात्मा नर्क जान्छ कि स्वर्ग कसलाई थाहा छ र ? तर, यो भव्य बिदाइले यहीं स्वर्गजस्तो भान भएको छ, मृतात्माले चीर शान्ति पाएको महसुस धेरैले गरेका छन् ।
शान्तिको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम बिदाइका लागि बुद्ध धर्मका गुरुज्यू
(भन्ते) ले रीतिथितिअनुसार पूजापाठ गरे । शान्तिका नजिकका नातेदारले उनको जन्मदेखि मरणसम्मको संक्षिप्त जीवनी पढेर सुनाए । त्यहाँ सुनाइएको जीवनीबाट ५५ वर्षमात्र यो धर्तीमा रहे पनि शान्तिले भोगेका भयंकर दुःख र कष्ट सबैले बुझ्ने मौका पाए । दुःखको सागरमा हेलिएकी शान्तिले जीवनमा धेरै संघर्ष गरिन्, अन्ततः उनी प्रेरणादायी नारी पात्रका रूपमा स्थापित भइन् । उनै शान्तिको वास्तविक जीवनकथा यहाँबाट सुरु हुन्छ ।
पचपन्न वर्षअघि अति विकट हिमाली गाउँमा बाबुआमाको तेह्रमध्ये छैटौं सन्तानका रूपमा शान्तिको जन्म भएको थियो । साइँली छोरीका रूपमा जन्मेकी शान्तिले स्कुलको मुख देख्न पाइनन् । त्यो बेलाको समाज एकातिर पराई घर जाने छोरीलाई किन पढाउने भन्ने मान्यताले जरो गाडेको थियो, अर्कोतिर आफूभन्दा मुनि धेरै भाइबहिनी भएकाले उनीहरूको हेरचाहको अभिभारा उनकै काँधमा थियो । त्यसो त धेरै सन्तानका मालिक, सम्पत्तिका गरिब बाबुआमाले पढाउन सक्ने कुरा पनि थिएन । शान्तिको बाल्यकाल साग, सिस्नु टिप्ने, दाउरा टिप्ने, पानी ओसार्ने अनि भाइबहिनीहरूको स्याहारसुसार गरेरै बित्यो । उनको उमेरसँगै जिम्मेवारी पनि थपिन थाल्यो । सिक्नुपर्ने कामहरू पनि थपिँदै गए । खेतीपाती गर्ने, डोको, नाम्लो बुन्ने, गाई भैंसीको गोठसँगै लेकबेंसी गर्ने, घाँस काट्ने र भेडाबाख्रा चराउने, मेलापातमा पर्म लाग्ने आदि इत्यादिमै उनको किशोर अवस्था बित्यो ।
उमेरले परिपक्व हुँदै गर्दा शान्ति गाउँमै बलिया, निडर, साहसी महिलाका रूपमा चिनिन थालिन् । हुन पनि उनले गाउँका छोरा मान्छेले भन्दा ठुल्ठूला घाँसका भारी बोक्ने, ढुंगामुडा बोक्ने, ठुल्ठूला अप्ठ्यारा भीरपाखामा रहेका रूखहरूमा चढेर घाँस काट्ने, ठेलो फ्याँक्नेजस्ता काम गर्न थालिन् । उनी अन्याय सहन सक्दिनथिन् । कुनै कुरा चित्त नबुझे ठाडै असहमति जनाउने र विरोध गर्ने बानी थियो । यतिमा पनि नभए झगडै गर्न पनि तयार हुने, छोरी मान्छे होस् वा छोरा जोसँग पनि मारपिटमा उत्रिहाल्ने स्वभाव थियो । तर, उनी यस्तै काममा मात्र सीमित थिइनन्, चाडपर्वमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा नृत्य गर्न र गीत गाउन पनि सबैभन्दा अघि सर्थिन् । थालीनृत्य र दोहोरी गीत गाउन शान्तिको विशेष रुचि र दख्खल थियो । उनी हट्टाकट्टा, बलिया, अग्ली सुन्दरी त थिइन् नै, अनुहारको बैंसजन्य लाली र छातीमा उठेको बडेमाका थुम्काहरूले झनै आकर्षक देखिएकी थिइन् ।
गाउँघरतिर छोरीले बीस वर्ष नाघेपछि बाबुआमालाई बिहे हुँदैन कि भन्ने चिन्ता सुरु हुन्छ । शान्तिको उमेर २१ वर्ष भइसकेको थियो । उनको पनि बिहे हुने सम्भावना नभएको सोच्न थालियो । धेरै मानिस त उनीसँग बिहे प्रस्ताव राख्नै हिच्किचाउँथे किनकि शान्तिको चित्त नबुझे मारपिट गरिहाल्ने बानी थियो । तर, ‘भावीले लेखेको, छालाले छेकेको, मेटेर मेटिन्न’ भन्ने नेपाली उखान यहाँ चरितार्थ भयो । आफ्नै कान्छी फुपू मैनाकुमारीका श्रीमान् कान्छा फुपाज्यू मखनबहादुर आफ्नो साइँलो छोरा गफलबहादुरका लागि शान्तिको हात माग्न टुप्लुक्क आइपुगे । मखनबहादुर प्रधानपञ्च, जिल्ला सभापति हुँदै राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यसमेत भइसकेको केन्द्रीयस्तरका नेता थिए ।
शान्तिकी फुपू मैनाकुमारी र मखनबहादुरबीच बिहेको पनि सिंगै कथा छ । मैनाकुमारी सदरमुकाममा होटल चलाएर बसेकी थिइन् । त्यही होटलको आम्दानीबाट सदरमुकाममै एउटा घर र प्रशस्त सम्पत्ति पनि जोडेकीे थिइन् । राजनीति गर्ने चलाख मखनबहादुरले मैनाकुमारीको त्यही सम्पत्तिमा आँखा गाडेको थियो । यसमा उनको राजनीतिक स्वार्थ पनि लुकेको थियो ।
मैनाकुमारीसँग बिहे गर्न पाएमा उत्तरी भेगको भोट पनि तान्न सकिने हिसाबकिताब गरेका थिए, उनले । त्यसैले पाँच भाइ छोरा र तीन दिदीबहिनी छोरीहरू जन्मेपछि परिवारनियोजन गरिसकेका मखनबहादुरले अनेक तानाबाना बुनेर मैनाकुमारीलाई कान्छी स्वास्नीका रूपमा भित्र्याइ छाडे ।
जेठीपट्टिका साइँला छोरा गफलबहादुरका लागि शान्तिको हात माग्नुमा पनि मखनबहादुरको त्यही स्वार्थ गाँसिएको थियो । मैनाकुमारीले आफूले कमाएका सबै सम्पत्ति आफ्नै भदैनीसँग बिहे गरेमा मात्र दिने वचन दिएकी थिइन् । त्यसैले मनैदेखि होइन, मखनबहादुर र गफलबहादुर बाबुछोरा दुवै मन नलागी–नलागी सम्पत्तिका लागि शान्तिको हात माग्न पुगेका थिए । बाबुछोराको यो इरादाबारे बेखबर शान्ति र उनको बाबुआमामा भने यो मगनीले असिम खुसी ल्याएको थियो । एक त उमेर ढल्केकी छोरी, अर्को आफूभन्दा धेरै धनीमानीको घर अनि आफ्नै कान्छा फुपाजु छोराका लागि हात माग्न आएपछि नाइनास्ती गर्ने कुरै थिएन । बाबुआमाकै मञ्जुरीमा शान्ति पनि बाटो लागिन् फुपाजूसँगै । बिरामी भएको नाटक गरेर बाटोमै बसेको गफलबहादुर पनि स्वास्नी लिएर बाटोबाट मिसियो ।
मखनबहादुरको जेठीपट्टिका छोरा गफलबहादुर ब्रिटिस आर्मीबाट पहिलो छुट्टी आएका थिए । गफलबहादुरले शान्तिलाई मनैदेखि चाहेकोभन्दा पनि कान्छी आमाको कुरा काट्न नसकेरमात्र लिएर आएका थिए । तर, जब शान्तिलाई लिएर गफलबहादुर सदरमुकामस्थित मैनाकुमारीका घर आइपुगे । मैनाकुमारीको आँखामा हर्षको आँसु रसाए । उनले त्यही घोषणा गरिन्, ‘अब मेरा सारा सम्पत्ति मेरी भदैनीले स्याहार्नेछिन् ।’ गफलबहादुरले कान्छी आमाको कुरा किन पनि काट्न सकेनन् भने आफ्नातिर जायजन्म नभएका मैनाकुमारीले नै जेठीतिरका सबै छोराछोरीलाई सदरमुकाममा राखेर पढाएका थिए ।
सदरमुकामपछि गफल र शान्ति गाउँको घर गए, गफलको आमालाई भेटे । गाउँमा पहिलो छुट्टी आएको लाहुरेको मानमनितो त थियो नै अझ तीन दिन टाढाको बाटोबाट ल्याएको नयाँ बुहारी पनि । नयाँ बुहारीलाई घर, गाउँ तथा इष्टमित्रले स्वागत गरे । बिरानो गाउँ, अर्काको घर जे भए पनि शान्तिले आफ्नै सम्झनुपर्ने थियो । तैपनि उनले परिवेशमा समाहित हुने कोसिस गरिन् । तर, घर आएपछि उनले गफलबहादुरको व्यवहार राम्रो नभएको थाहा पाए । क्रमशः